Puntland oo xukun ku riday Xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish - Awdinle Online
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida iyo denbiyada culus ee shanta Gobo lee dowlad Goboleedka Puntland ayaa xukunno dil iyo xarig isugu jira ku xukuntay rag lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish.
Raggaas oo gaarayay ilaa iyo Saddex Nin ayaa waxaa la sheegay in Ciidanka Puntland ay u soo qabteen falal isugu jiray Dil iyo wax loogu yeero Argagaxisinimo, waxaana Maxkamadeyntooda ay ka dhacday Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari.
Gududdoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Gobolada Bari, Sanaag, Hayland, Karkaar iyo Gardafuu Ibraahim Bile Maxamed ayaa sheegay laba mid ah raggaas lagu riday Xukun dil toogasho ah.
Magacyada laba Nin ayaa lagu sheegay Aadan Maxamed Xasan iyo Abshir Maxamed Candiraxmaan Tooshle, kuwaasi oo lagu eedeeyay in deegaano ka tirsan Puntland ay ka geysteen dilal kala duwan, lana qabtay.
Ugu dambeyn Gududdoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Gobolada Bari ayaa sheegay in eedeysanaha Saddexaad oo lagu magacaabo Maxamuud Shiniyow Cali lagu riday xukun ah 20 sano oo xabsi ah.
Previous articleAl-Shabaab oo weerar xoogan ku qaaday Saldhig Ciidan
Next articleNISA” Booliska ayaa mas’uul ka ah in Shabaab qaraxyo soo geliyaan Muqdisho”